“Joojiya nabaadguurinta ummadda aad nabaadguurinaysaan, dadka aan mudnayn dilka aad dilaysaan joojiya” Garaad C/llahi Cali Ciid. – Radio Daljir
Garowe, Aug 08 – Garaad C/llahi Cali Ciid oo ku hadlay afka Issimada Puntand ayaa cambaareeyey dilka nabadoon Xasan Xuseen Walloore oo xalay lagu dilay magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug.
Garaad C/llahi Cali Ciid waxaa uu sheegay in ay khasab tahay in la helo cidda ka dambaysa fal-dambiyeedyada noocan oo kale ah oo uu ku sifeeyey wuxuushnimo.
“In biri-magaydhada la laayaa waa halaag” ayuu yiri Garaadku.
“Ummadda waxaa badan inta wanaaga rabta …waxaan aad ula yaabanahay waxaa hallagay ummadda” ayaa uu yiri.
Garaadku waxaa uu intaas ku daray in dilalka noocan oo kale ahi ay yihiin masiibo lagu salliday ummadda, loona baahan yahay in si wada jir ah la isaga kaashado, lagana hortago dhagar-qabayaasha soo maleega lurta ummadda.
Waxaa uu xusay in aanay caqligal ahayn in dadka la laayo, lana yiraahdo lama yaqaan cidda laysay.
Madaxda, Issimada, nabadoonada iyo shacabka gobolka ayaa uu ugu baaqay in la joojiyo falal-dambiyeedyada iyo dhagarta laga galayo bulshada inteeda biri-magaydhada ah.
Garaadku waxaa uu ku taliyey is-kaashi ay yeeshaan bulshada qaybaheeda kala duwan si loo cirib tiro dilalka waxashnimada ah.
Dhawrkii sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa gobollada Puntland ka dillaacay dilka nabadoonada, indheergaradka, iyo madaxda dawlada; walow la sheego in dilalka ay fuliyaan kooxaha xag-jirka ah ee falsafada diineed wata, ayaa hadana uu jiraa dareen ah in dilalku ay yihiin aano qabiil oo weji diineed loo yeelay.
Si kastaba ha ahaatee, dilka nin doorku caado aan laba cali is-weydiin ayaa ay ka noqotay gobollada Puntland.